Jubbaland oo soo bandhigay nin ku eedeeysan Fal Danbiyed ka Dhacay Bosaso. - Latest News Updates
Jubbaland oo soo bandhigay nin ku eedeeysan Fal Danbiyed ka Dhacay Bosaso.
C/qaadir Warsame Axmed oo ku eedeeysnaa in 27-ka bisha October, ee sanadkan uu Fal Danbiyeed u geeystay gabar lagu magacaabo Fa’izo Max’ed, kana baxsaday deegaanada Puntland, islamarkaana mudooyinkii u danbeeyay ku sugnaa Kismaayo ayay gacanta ku dhigeen ciidamada Booliska Jubbaland.
Eedeeysanaha ayaa lagu soo bandhigay xarunta Booliska Jubbaland, ayadoo saraakiisha ciidamadu ay sheegeen in ay u suurogashay in ay ninkani gacanta ku dhigeen kadib markii ay heleen xog ah in uu yimid Kismaayo.
Taliyaha Booliska Jubbaland Col. Cabdi Naasir ayaa sheegay in ninkani uu ku jiro gacanta Booliska Jubbaland ayna u gudbin doonaan dhanka Puntland, si halkaasi loogu maxkamadeeyo.
Fai’za oo 15-jir ah ayaa 27-kii Bishii Hore Lagu dhibaateeyay Boosaso, ayeey Ehelkoodu u sheegeen SBC in gabadha Uu Ninkaasi Xabad kaga dhuftay Qeybta Taranka ee jirkeeda, Kadib markii uu isku dayay inuu Kufsado, waxaana ninkaasi ay sheegeen inuu ka Tirsanaa Ciidanka Badda ee Maamulka Puntland, Balse Taliska Ciidanka Badda ee maamulka Puntland ayaa Iska Fogeeyay inuu Ninkaasi ka Tirsanaa.
Hay’adaha u dooda xuquuqul Insaanka iyo qaar kamid ah ururrada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya ayaa cambaareeyay falka Fooasha Xun ee loo geeystay gabadhaasi Soomaaliyeed, wallow ilaa hadda aysan maxkamadi xukun ku ridin eedeeysane C/qaadir Warsame Axmed.